दसैँ (कथा) | चितवन पोष्ट
गृह » दसैँ (कथा)
सिंगो बस्तीमा दसैँको चहलपहल छाएको छ । दसैँ नजिकिएसँगै कमेरो माटो र रातो माटोले बस्तीका घरहरु पोती रंगीबिरंगी बनाइएका छन् । चौबाटोमा हालिएको पिङ खेलेर रमाउनेहरु पनि धेरै छन् । स्वदेश तथा विदेशमा भएका युवायुवती दसैँ मनाउनैका लागि घर फर्किएका छन् । आफ्ना साथीभाइहरुसँगको भेटघाटमा रमाउने, बालापनका कुराहरु गरेर गफिनेहरु पनि बढ्दै छन् । बूढाबूढीदेखि केटाकेटीसम्ममा बजारमा नयाँ कपडा किन्नेको भीड छ । कतिपयले आफ्नो घरमा खसीसमेत ल्याएर बाँधिसकेका छन् । दसैँको चहलपहल बढ्दै गए पनि गाउँकै छेउमा रहेको कोपिलाको घरमा भने त्यस्तो उत्साह केही देखिँदैन ।
“ममी, नयाँ नाना कहिले किन्ने ?” ्
अनि, रोहितले समालिँदै भन्छन्, “हेर म सधँैका लागि हैन, एक–दुई वर्ष पैसा कमाउनका लागि पो जान लागेको । फेरि फर्कौंला, अनि सँगै जिऊँला ।”
परिवारले बिदाइको हात हल्लाएसँगै रोहित मलेसियाका लागि घरबाट निस्किए । भोलिपल्ट काठमाडाँैबाट मलेसियन एयरवेजबाट उनको उड्ने टिकट थियो । उनीसँगै जाँदै थिए अन्य पाँच जना नेपाली साथीहरु पनि । उनीहरुलाई काठमाडौँमा आजै भेट्नु थियो ।
रोहितले चार महिनासम्म राम्रै कमाइ गरेर घरमा पढाए । चारै महिनाको अवधिमा उनले आफू जाँदा लगाएको डेड लाख रूपैयाँ ऋणमध्ये पचास हजार रूपैयाँ त ऋण पनि तिरे । एकदिन एक्कासि मलेसियाबाट कोपिलाको मोबाइलमा फोन आयो । तर, योपटक आएको नम्बर सधैँ जस्तै एउटै थिएन । फरक नम्बरबाट फोन आयो । के गरौँ के गरौँ हँुदै कोपिलाले मोबाइल उठाइन् ।
कोपिला छोराछोरीहरु लिएर दैनिक ज्यालादारी गर्दै आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन् । दिनभरि साहूको घरमा काम ग¥यो । कमाएको ज्यालाले परिवारको जीवन धान्यो । अहिले कोपिलाको जीवन यसरी नै चलिरहेको छ । कोपिलालाई के दसैँ के तिहार ! जस्तोसुकै चाडपर्व आए पनि मन त्यति खुसी हुँदैन । होस् पनि कसरी ? छोराछोरीले चाडबाडमा लत्ताकपडा किन्ने, मीठोमसिनो खाने माग गरे पनि उनी पूरा गर्न सक्दिनन् । छरछिमेकका घरबाट ल्याएको जडौरी नै उनीहरुको लाज छोप्ने साधन हुने गर्छ ।